IsiJalimane, iJalimane Ngingafinyelela kanjani kuleveli engiyifunayo? - EJALIMANE
Ucabanga ukuthi ngingafinyelela isikhathi esingakanani kwizinga engilifunayo?
« : Okthoba 04, 2014, 04:10:20 pm »
Ngivela e-Anatolian High School, ngakho-ke ngijwayelene kancane nesiJalimane. Ngizokwenza i-internship kuleli hlobo futhi ngicabanga ukuyenza eJalimane.Ngihlela ukuqala ukusebenza ngesiJalimane. Kepha abangani bami abambalwa bathi isiJalimane sinzima (uma kuqhathaniswa nezinye izilimi) Ngiyazibuza ukuthi ngingafinyelela kuliphi izinga onyakeni owodwa, uma nginabangani abaqale phambilini, bakuliphi izinga. Futhi nginesifiso sokuqhubeka nemfundo yami eJalimane ngemfundo ephakeme ngemuva kweminyaka eyi-1. IsiNgisi sami singcono kakhulu kunesiJalimane, ngicabanga ukuthi ngabe kufanele ngilayishe isiNgisi kuphela?
Re: Ngingasheshe ngifinyelele kanjani ileveli engiyifunayo?
« Phendula #1: Agasti 04, 2015, 12:26:35 am »
Ayikho into enzima, mngani wami, hamba uye lapho ufuna khona, uqonde umqondo ngokubamba ngekhanda amagama nezenzo, yenza umusho ngokwawo, futhi ungabuka ama-movie anemibhalo engezansi yesiTurkey ngolimi lwesiJalimane noma okuphambene nalokho Uzothi "usuku" lapho uthi "lapha", usuke wakubheka, usuhumushela izingoma kusi-Turkish. Shiya i-Grammar okokugcina futhi uma ungena ku-Grammar ungazi lutho, uzodideka futhi ngeke uqonde lutho. Asifundeki uhlelo lolimi lapho siseyizinsana, ngemuva kwakho konke, siyaqala ukuzwa, bese siyaqonda, bese siyakhuluma. Umkhulu wami uyasazi isiJalimane, ngicabanga ukuthi ngiyamthuka njengephethini yesenzo sohlelo lolimi, kepha uthi kungaba ngcono uma ungashongo lokho, esikhundleni salelo gama, unikeza izinkomba ezinjengalezi, isibonelo, ubani onendaba mayelana ne-geamer ngemuva kokubazi :-)